Top6sữa dê cho bé tốt được các mẹ tin dùng nhất hiện nay | Grado.vn - Grado.vn
Đang Đọc: Top6sữa dê cho bé tốt được các mẹ tin dùng nhất hiện nay | Grado.vn in grado.vn
हामी सबैलाई थाहा छ, बच्चाहरूको व्यापक विकासको लागि, दूध पिउने सधैं पहिलो प्राथमिकता उत्पादन हो जुन आमाहरूले प्रायः रोज्छन्। यद्यपि, बच्चाहरूमा गाईको दूध प्रोटीन एलर्जी सामान्य छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई बान्ता हुने, कब्जियत हुने, आन्द्रा चल्ने र ढिलो तौल बढ्ने गर्छ। तसर्थ, उत्पादनको उत्कृष्टताको कारण धेरै आमाहरू अब बाख्राको दूधमा फर्किरहेका छन्। निम्न लेखमा संक्षेप गरिनेछ बच्चाहरूको लागि शीर्ष6बाख्राको दूध अहिले राम्रो तपाईंको सन्दर्भको लागि।
1 बाख्राको दूध भनेको के हो?
2 के बाख्राको दूध पिउन राम्रो छ?
3 आज नवजात शिशुहरूको लागि शीर्ष6उत्कृष्ट बाख्राको दूध
3.1 3.1 कोरियाली बाख्राको दूध हिकिड
3.2 ३.२ बाख्राको बाख्राको दूध ०+ (०-१२ महिनाका बालबालिका)
3.3 ३.३ ०-६ महिनाका बच्चाहरूको लागि कब्रिता बाख्राको दूध नम्बर १
3.4 3.4 बाख्रा मिल्क गोट मिल्क BA – बाख्राको दूध
3.5 3.5 कोरियामा Ildong नम्बर 1 बाख्राको दूध – बच्चाहरूको लागि बाख्राको दूध
3.6 3.6 बच्चाहरूको लागि बाख्राको दूध DG 1
बाख्राको दूध भनेको के हो?
वास्तवमा, बाख्राको दूध भनेको बाख्राबाट दूध निकाल्ने दूध हो, जुन मुख्यतया घरेलु बाख्रा हुन्। यो देख्न सकिन्छ कि यो एक महत्त्वपूर्ण, पौष्टिक खाद्य स्रोत हो। तसर्थ, बाख्राको दूधलाई बालबालिकाका लागि पौष्टिक रूपमा मूल्यवान खानाको रूपमा सिफारिस गरिएको छ।
यसको अतिरिक्त, बाख्राको दूध पनि एक गुणस्तरीय खाना हो, शताब्दीयौं देखि विश्वसनीय। यसबाहेक, बाख्राले शरीर र वातावरणको लागि धेरै फाइदाहरू सहित एक अद्वितीय, स्वस्थ दूध उत्पादन गर्दछ। पिउनुहुँदा तपाईंले तटस्थ स्वाद महसुस गर्नुहुनेछ, अलिकति नट स्वाद र हल्का क्रीमयुक्त बनावट।
के बाख्राको दूध पिउन राम्रो छ?
गाईको दूधमा रहेको प्रोटिन र ल्याक्टोजसँग एलर्जी भएका बच्चाहरूका लागि बाख्राको दूध उत्कृष्ट विकल्प हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। कारण यो हो कि बाख्राको दूधमा गाईको दूधमा पाइने जटिल प्रोटीनहरू हुँदैन र कम ल्याक्टोज सामग्री हुन्छ। तसर्थ, यो एलर्जी कम छ। एकै समयमा, बाख्राको दूध सामान्य बच्चाहरूको लागि मात्र होइन तर गाईको दूधमा एलर्जी भएका बच्चाहरूको लागि पनि इष्टतम समाधान हो।
बाख्राको दुधका फाइदाहरू उल्लेख गर्नैपर्छ कि यो स्वादिष्ट, चिसो र ओमेगा6मा भरपूर छ। त्यसैले, बाख्राको दूधले बच्चाहरूको दिमागको विकासलाई उत्तेजित गर्ने प्रभाव पार्छ। थप रूपमा, बाख्राको दूधमा बोसो कम हुन्छ र गाईको दूध भन्दा भाँच्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसकारण, यसले शरीरलाई सजिलै पचाउन र अवशोषित गर्नका लागि अवस्थाहरू सिर्जना गर्नेछ।
त्यति मात्र होइन, बाख्राको दूधमा क्याप्रिलिक एसिड जस्ता तत्वहरूको लागि प्राकृतिक एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणहरू पनि छन्, त्यसैले यसमा पाचन प्रणालीलाई शान्त पार्ने र आन्द्रासम्बन्धी समस्याहरू सुधार गर्ने क्षमता हुन्छ।
यसबाहेक, बाख्राको दूधमा प्रोटिन, भिटामिन ए, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र भिटामिन ए र बी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यी तत्वहरूले बालबालिकाको उचाइ बढाउन र हड्डी र तौल छिट्टै विकास गर्न मद्दत गर्छ। विशेष गरी, बाख्राको दूधमा फलाम र तामाको चयापचय बढाउने क्षमता पनि हुन्छ, विशेष गरी ती व्यक्तिहरूमा जसलाई यी पदार्थहरू अवशोषित गर्न र पचाउन गाह्रो हुन्छ।
एक प्रभावशाली बिन्दु यो हो कि दूधमा पोषण सामग्री चाँडै बच्चाहरु द्वारा अवशोषित हुन्छ, भोक र धेरै खाने को नेतृत्व। एकै समयमा, वजन, कद सुधार, फलामको कमी एनीमिया रोक्न। त्यहाँबाट, यसले हड्डी ओस्सिफिकेशन, हड्डीको खनिजीकरण र हड्डीको घनत्व बढाउन मद्दत गर्दछ। जसले गर्दा बच्चाहरूलाई हुर्काउन र हुर्काउनको लागि हड्डी बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ।
तसर्थ, बाख्राको दूधको प्रयोगले बच्चाहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा वजन सुधार गर्न, प्रतिरोध बढाउन र हड्डीको खनिजीकरण बढाउन मद्दत गर्दछ। त्यति मात्र होइन, यसले रगतमा सीरम भिटामिन, मिनरल्स र हेमोग्लोबिनको मात्रा पनि बढाउँछ ।
यद्यपि, बाख्राको दूधको नकारात्मक पक्ष यो हो कि यो आमाको दूध वा गाईको दूधमा आधारित सूत्र भन्दा पोषक तत्वहरूमा कम हुन्छ। यसबाहेक, बाख्राको दूधमा भिटामिन डीको मात्रा एकदमै कम, आइरन, भिटामिन बी १२ र फोलेट कम हुन्छ। विशेष गरी यदि कडा रूपमा पाश्चराइज गरिएको छैन भने, बाख्राको दूधमा धेरै प्रकारका ब्याक्टेरियाहरू हुन सक्छन् जसले बच्चाहरूलाई रोगहरू निम्त्याउँछ।
थप हेर्नुहोस्: [Review] Pediasure दूध राम्रो छ? कस्ता प्रकारहरू समावेश छन्?
बिक्रीमा रहेका उत्पादनहरू ५०%
आज नवजात शिशुहरूको लागि शीर्ष6उत्कृष्ट बाख्राको दूध
बाख्राको दूध विकास र वयस्कताको अवधिमा साना बच्चाहरूको लागि धेरै राम्रो र उपयुक्त छ। तसर्थ, आमाहरू सधैं आफ्ना बच्चाहरूलाई सबैभन्दा व्यापक उचाइ र वजन विकास गर्न मद्दत गर्न दूधको प्रकार खोज्न चाहन्छन्। तल सूचीबद्ध सामान्य दूध रेखाहरूले आमाहरूलाई उनीहरूको बच्चाहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा उपयुक्त उत्पादनहरू सन्दर्भ गर्न र छनौट गर्न मद्दत गर्नेछ।
3.1 कोरियाली बाख्राको दूध हिकिड
आज नवजात शिशुहरूको लागि शीर्ष6उत्कृष्ट बाख्राको दूधमा पहिलो उत्पादन कोरियाली हिकिड बाख्राको दूध हो। कोरियाको उच्च पहाडी क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरणमा पालिएका बाख्राको सुरक्षित दूधबाट यस प्रकारको दूध उत्पादन गरिन्छ। साथै, दूध 1 देखि9वर्ष सम्मका बच्चाहरु को लागी डिजाइन गरिएको छ। किनभने यो बच्चाको उचाइ र वजनको बलियो वृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण अवधि हो।
सामग्रीको सन्दर्भमा, हिकिड बाख्राको दूधमा आइरन, क्याल्सियम, भिटामिन डी, जिंक र अन्य धेरै ट्रेस तत्वहरू प्रशस्त मात्रामा पौष्टिक तत्वहरू छन्। यसरी, उत्पादनले तपाईंको बच्चालाई अग्लो, स्वस्थ र स्मार्ट हुन मद्दत गर्नेछ। विशेष गरी, हिकिड बाख्राको दूधमा पोषक तत्वहरूको सामग्री गाईको दूध भन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ। फ्याटी एसिड (> गाईको दूधको 35%), क्याल्सियम (> गाईको दूधमा 33%), फलाम (> गाईको दूधमा 5%), भिटामिन ए (> गाईको दूधको 10%) …
यसबाहेक, धेरै ट्रेस तत्वहरूको साथ, दूधले पाचन प्रणालीलाई समर्थन गर्न र अवशोषण बढाउन मद्दत गर्दछ। एकै समयमा, उत्तेजक चयापचय, बच्चाको तौल बढाउन, उचाइ विकास गर्न र उत्कृष्ट मस्तिष्क हुन मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, यसले सूक्ष्म पोषक तत्वहरूको अवशोषण, बच्चाको आन्द्रा अवरोध कार्यको विकास र मर्मतसम्भारलाई पनि सुविधा दिन्छ।
उत्पादन मूल्य: 685,000 VND/700 ग्राम।
सन्दर्भ: २०२१ मा शीर्ष ५ सबैभन्दा लोकप्रिय स्तन दूध शोषक प्याडहरू
३.२ बाख्राको बाख्राको दूध ०+ (०-१२ महिनाका बालबालिका)
यो पनि दूधको प्रकार हो जुन आज भियतनामी आमाहरूले रोज्ने नवजात शिशुहरूको लागि शीर्ष6उत्कृष्ट बाख्राको दूधमा छ। थप रूपमा, प्राकृतिक फाइबर पूरक Synergy 1 ले दिसालाई नरम बनाउन, पाचन सुधार गर्न र आन्द्राहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सुरक्षा गर्न मद्दत गर्दछ।
साथै, दूधमा DHA, choline, tourine पाइन्छ जसले मस्तिष्क र दृष्टिको विकासमा मद्दत गर्छ। त्यहाँबाट, बच्चाहरूलाई तिनीहरूको बौद्धिकता बढाउन, सिक्ने क्षमता बढाउन र वरपरको संसारको अन्वेषण गर्न मद्दत गर्दै। त्यति मात्र होइन, उत्पादनमा प्यालाटिनोज पनि हुन्छ जसले मस्तिष्कका कोशिका र स्नायु प्रणालीलाई निरन्तर र स्थिर ऊर्जा प्रदान गर्न मद्दत गर्छ।
एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने Goatlac 0+ बाख्राको दूधमा क्याल्सियम, फस्फेट र भिटामिन डी पनि हुन्छ। यी कम्पोनेन्टहरू हड्डीको संश्लेषणको लागि उत्कृष्ट उचाइ विकास गर्नका लागि आवश्यक हुन्छन्। र Lysine ले बच्चाहरूलाई स्वादिष्ट, राम्रोसँग अवशोषित गर्न मद्दत गर्दछ। एकै समयमा, एनोरेक्सिया सुधार गर्दै, बच्चाहरूलाई राम्रोसँग खान मद्दत गर्न पाचन उत्तेजित गर्दछ।
उत्पादन मूल्य: 600,000 VND/800 ग्राम।
३.३ ०-६ महिनाका बच्चाहरूको लागि कब्रिता बाख्राको दूध नम्बर १
वास्तवमा, हाइप्रोका न्यूट्रिशनको नम्बर 1 कब्रिता बाख्राको दूध यसको उच्च प्रोटीन र फ्याट अनुपातको लागि फरक छ। थप रूपमा, एआरए, प्रि-डीएचए, ओमेगा6… मा समृद्ध फ्याटले बच्चाहरूलाई सजिलै पचाउन र अवशोषित गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, बाख्राको दूधमा रहेको प्रोटिनमा ह्वी प्रोटिनको तुलनामा ४ गुणा बढी क्यासिन प्रोटिन हुन्छ।
यसबाहेक, GOS, FOS, र लाइभ ब्याक्टेरिया Bifidobacterium BB12 को संयोजनको लागि धन्यवाद, उत्पादनले प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढाउन र बच्चाको प्रतिरोधलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। विशेष गरी, बच्चाहरूको लागि यस प्रकारको बाख्राको दूधमा पनि स्तन दूध जस्तै धेरै प्राकृतिक न्यूक्लियोटाइडहरू समावेश छन्। तसर्थ, बच्चाहरूलाई प्रतिरोध बढाउन मद्दत गर्नुहोस्, पखाला, डिप्थेरिया र मेनिन्जाइटिसबाट बच्न।
आमाहरूले धेरै चासो राख्ने एउटा बिन्दु दूधमा DHA, choline, र taurine घटकहरू मस्तिष्क र दृष्टि विकास गर्न मद्दत गर्न हो। यसरी, बालबालिकाको बौद्धिकता बढाउन मद्दत गर्नुहोस्।
उत्पादन मूल्य: 480,000 VND/ 400 ग्राम को बक्स।
थप हेर्नुहोस्: बच्चाहरूको लागि शीर्ष5उत्कृष्ट दूध बोतलहरू, आमाहरूलाई थाहा हुनुपर्छ
3.4 बाख्रा मिल्क गोट मिल्क BA – बाख्राको दूध
कुपोषित र स्टन्ट भएका बच्चाहरू भएका आमाहरू, गोटामिल बीए बाख्राको दूध एक उत्कृष्ट सुझाव हो। यो उत्पादन ब्रान्ड DairyGoat – भियतनाम डेयरी उत्पादन संयुक्त स्टक कम्पनी को हो जसमा नेदरल्याण्ड्सबाट आयात गरिएका सामग्रीहरू छन्। यसबाहेक, गोटामिल बीए दूधमा धेरै उच्च प्रोटीन र लिपिड सामग्री हुन्छ। त्यहाँबाट, एनोरेक्सिया र अल्छी खानेहरूका लागि मात्र 1 एमएल दूधको साथ पर्याप्त ऊर्जा प्रदान गर्नुहोस्।
थप रूपमा, गोटामिल बीए दूधमा सजिलै अवशोषित प्रोटीन घटकहरू हुन्छन्। विशेष गरी, बाख्राको दूध प्रोटीन र सोया प्रोटीन बीचको विभाजन अनुपातले बच्चाहरूको लागि पोषण सन्तुलन र पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्दछ। त्यति मात्र होइन, यो बाख्राको दूधमा बालबालिकाको वृद्धि अवस्थाका लागि आवश्यक तत्व लाइसिन नामक एमिनो एसिड पनि प्रशस्त हुन्छ । तसर्थ, उत्पादनले बच्चाहरूलाई राम्रो खान, राम्रो पचाउन, छिटो बढ्न र फस्टाउन मद्दत गर्दछ।
यस बाख्राको दूधको उत्कृष्ट फाइदा भनेको कब्जियत रोक्न र आन्द्राका लागि लाभदायक ब्याक्टेरिया विकास गर्न मद्दत गर्नको लागि Synergy1 डुअल फाइबर प्रणाली (FOS/Inulin) हो। एकै समयमा, आन्द्रा गतिशीलता बढाउनुहोस्, बच्चाहरूलाई राम्रोसँग अवशोषित गर्न मद्दत गर्नुहोस्। ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा के हो भने गोटामिल बीए दूधमा बच्चाको दिमाग र दिमागको विकास गर्न मद्दत गर्ने धेरै पोषक तत्वहरू छन्। एकै समयमा, बच्चाहरूलाई थप बौद्धिक, सिक्न उत्सुक, वरपरको संसारको बारेमा जान्न उत्सुक हुन मद्दत गर्दछ।
उत्पादन मूल्य: 300,000 VND/400 ग्राम।
3.5 कोरियामा Ildong नम्बर 1 बाख्राको दूध – बच्चाहरूको लागि बाख्राको दूध
यदि कुनै आमा अझै पनि आफ्नो नवजात शिशुको लागि कुन बाख्राको दूध उत्तम हो भनेर सोचिरहनुभएको छ भने, उनीहरूले नम्बर 1 कोरियाली इल्डोङ बाख्राको दूधलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। उच्च गुणस्तरको खण्डमा उत्पादनहरू 100% सफा सामग्रीबाट बनाइन्छ जुन बालबालिकाको स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त सुरक्षित हुन्छ।
सामग्रीको हिसाबले, कोरियाको नम्बर 1 इल्डोङ बाख्राको दूध प्रोटिन र चिसो फ्याट भएको चिसो दूधको रेखा हो जुन अवशोषित गर्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ, यसले पाचन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। विशेष गरी, Ildong बाख्राको दूधमा प्रायः स्तनको दूध जस्तै कार्यात्मक संरचना हुन्छ, त्यसैले यो बच्चाहरूका लागि उपयुक्त हुन्छ जो हुर्कन ढिलो हुन्छन्, राम्रो खान्छन् र विशेष गरी गाईको दूधको प्रोटिनसँग एलर्जी हुन्छ।
बच्चाहरूको लागि यो बाख्राको दूधको फाइदा चिसो र शुद्ध मात्र होइन, तर उच्च पोषण मूल्य पनि छ। थप रूपमा, RMP गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत एकीकृत व्यवस्थापनको पदोन्नतिको लागि छोटो उत्पादन प्रक्रियाको अनुकूलन सम्भव छ। नतिजाको रूपमा, उत्पादन बच्चाको स्वास्थ्यको लागि उत्तम छ।
उत्पादन मूल्य: 1,450.00 VND/800 ग्राम।
3.6 बच्चाहरूको लागि बाख्राको दूध DG 1
अन्तमा आज नवजात शिशुहरूका लागि शीर्ष6उत्कृष्ट बाख्राको दूधमा DG 1 छ। यो ताजा बाख्राको दूधबाट बन्द प्रक्रियाबाट उत्पादित प्राकृतिक र विशेष सुगन्धको साथ न्यूजील्याण्डको शुद्ध प्राकृतिक ताजा बाख्राको दूधको लाइन हो।
अवयवहरूको सन्दर्भमा, दूधमा धेरै प्राकृतिक जैविक रूपमा सक्रिय पदार्थहरू छन्। जस्तै एन्टिबडीहरू, वृद्धि कारकहरू, न्यूक्लियोटाइडहरू, ओलिगोसेकराइडहरू … त्यसैले, यसले बच्चाको स्वस्थ वृद्धिको लागि प्रतिरक्षा प्रणालीलाई अधिकतम बनाउन मद्दत गर्दछ। त्यति मात्र होइन, दूधमा रहेको बोसो पनि सजिलै पचाउन र अवशोषित हुन्छ, जसमा एए, प्रि-डीएचए, र ओमेगा ६ पाइन्छ। साथसाथै शुद्ध प्राकृतिक मस्तिष्क विकास पोषक तत्व जस्तै टौरिन, कोलाइन, बी भिटामिन, से, Fe… यी सबै सामग्रीहरूले बच्चाहरूलाई स्मार्ट हुन मद्दत गर्नेछ।
यो देख्न सकिन्छ कि बाख्राको दूध सूत्र DG 1 दैनिक आहारको लागि पोषण पूरक हो। एकै समयमा, बच्चाहरूलाई स्वस्थ हुनको लागि पौष्टिक खाजाहरू बदल्नुहोस्। यसबाहेक, मोनो र पोली अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड र मध्यम चेन ट्राइग्लिसराइड्सको सामग्रीले मानव स्वास्थ्यको लागि ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ।
उत्पादन मूल्य: 473,000 VND/400 ग्राम।
माथिको लेख संकलित गरिएको छ आजका बच्चाहरूको लागि शीर्ष6उत्कृष्ट बाख्राको दूध। प्रत्येक परिवारको आवश्यकता र आर्थिक क्षमतामा निर्भर गर्दै, आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको लागि प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त उत्पादन छनौट गर्छन्। आशा छ, माथिको जानकारीले तपाईंलाई आफ्नो साना बच्चाहरूको लागि सही बाख्राको दूध उत्पादन छनौट गर्न मद्दत गर्नेछ।
Xem Thêm Tổng hợp đầy đủ 21 mẹo tăng cường sinh lý nam nâng cao phong độ | Grado.vn
Galaxy Z Fold2 5G Đặc Biệt ,giá rẻ, chính hãng | Grado.vn